Kitra any Eoropa: nahomby i Hery Bastien, ratsy fanombohana i Anicet | NewsMada
Kitra any Eoropa: nahomby i Hery Bastien, ratsy fanombohana i Anicet
Faharesena avy hatrany no nahazo ny Ludogorets, ilalaovan’i Abel Anicet, kapitenin’ny Barea de Madagascar, teo amin’ny andro voalohany hiadiana ny ho tompondakan’i Bolgaria, taranja baolina kitra, ny asabotsy teo. Niondrika tamin’ny isa mazava 3 no ho 1 ity ekipa tompondakan’i Bolgaria ity nanoloana ny Botev Vratsa. Tsy tena tafiditra tao anatin’ny lalao ihany koa i Abel Anicet hany ka voatery nosoloina teo amin’ny minitra faha-60. Efa nitarika tamin’ny isa 3 no ho 0 ny mpifanandrina tamin-dry zalahay vao nahafaty ny baolina tokana ho azy ny Ludogorets tany amin’ny fanampim-potoana 90 mn + 3, tamin’ny alalan’ny penalty, tafiditr’i Cauly Oliveira Souza. Anisan’ny olana ho an’ny Ludogorets ihany koa ny nilalaovany folo, vao nanomboka 33 mn ny fihaonana teo amin’ny roa tonta. Nahazo karatra mena mantsy i Svetoslav Dyakov.
Fahombiazana kosa ny an’i Hery Bastien teo amin’ny lalao savaranonando ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”. Resin’ny Linfield FC tamin’ny isa 2 no ho 0 ny Tre Fiori. I Hery no nampiditra ny baolina voalohany teo amin’ny minitra faha-71 sy ny an’i Manzinga, minitra faha-83.
Nandresy koa ny ekipan’ny Charleroi sy Ilahimaharitra Marco tany Belzika teo amin’ny fifaninanam-pireneny. Nivoaka mpandresy tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 ry zalahy raha nihaona tamin’ny FC Bruges. Tolotra avy any amin’ity mpilalao malagasy ity no nahafatesan’i Morioka ny baolina, teo amin’ny minitra faha-78.
Farany, resin-dry Bolida sy ny Paris FC tamin’ny isa 2 no ho 1 ny ekipan’ny Estac, misy an-dRaveloson Ryan, teo amin’ny lalao firahalahiana ny asabotsy lasa teo. Hidona amin’ny Sedan Fc indray zalahy, rahampitso alarobia.